cilmi iyo gabayadiisii | www.saaxil.tk
ku soo dhawaada gacmo furan asxaabta halkan waxaad ka akhrisandoontaan qisadii cilmi boodhari
wixii faahfaahina kala soo xiriir email: sayidka1066@gmail.com amaba c.samed1066@hotmail.com
Gabaygan “Caashaqa Haween” waxa uu tiriyey Cilmi Boodhari ka dib markii uu u adkaysan waayey dadkii magaalada Berbera degganaa oo u soo daawasho tegi jiray si ay u arkaan ama ugu maadaystaan ninka jacaylka sheeganayaana. Sababta ay taasi ku dhacday waxay ahayd iyadoo Soomaalidii waagaas jirtay (waa horraanta 1930kii) aanay aqoon u lahayn jacaylka. Gabaygan, oo la sheegay in uu ahaa kii ugu horreeyey ee uu Cilmi tiriyo, waxa la joogay markii uu marinayey Muuse iyo Tabaase, kuwaasoo u garaabay, garaystayna in dhibaato ba’ani ay Cilmi Boodhari haysato.
Tixdan gabayga ah waxa uu Cilmi Boodhari ka tiriyey mar uu ku riyooday Hodan. Waxa la sheegay in Cilmi habeenkii ka horreeyey uu ku soo lugeeyey roob magiigaan ah oo saaxiibkiis Tabaase uu uga caalwaayey in uu meel ka galo. Habeenkaas Cilmi aad ayuu u xanuunsaday oo taahiisii iyo gurxankii ka baxayey Muuse iyo Tabaase oo ay guriga wada degganaayeen waa ka seexan kari waayeen. Subixii xigay ayuu Cilmi indhaha kala qaaday iyadoo ay Muuse iyo Tabaase ay kor taagan yihiin. Halkaas ayuu Boodhari ka mariyey tixdan oo uu ku suuraynayo inantii xalay riyada ugu timid.
Cilmi Boodhari markii uu jacaylkii si wayn ugu baahay, inantii uu calmadayna ay wax la qaban wayday ayaa waxa u birmaday qaar ka mid ah hablihii magaalada Berbera. Cilmi ayay hablihii maalin casumeen oo qado aad u macaan u kariyeen. Waxay soo xidheen dhar aad u wada bilicsan iyadoo aanu ka maqnayn udgoonkii iyo casarlegedkii uunsiga. Midba mid bay u tilmaantay oo quruxdeedii iyo dabeecaddeedii uga warrantay, oo ku yiraahdeen “Cilmiyow maxay Hodan na dheer tahay? Mid naga mid ah dooro oo ha laguu guuriyo”. Waxa Cilmi Boodhari uu halkaa ka tiriyey gabaygan
Gabaygan waxa uu u jeediyey saaxiibadiis Muuse iyo Tabaase kuwaasoo kula taliyey inuu Hodan iska ilaawo, maadaama uu yahay nin sabool ah oo aan reerkeedii waydiisan karin. Cilmi isagoo ka calaacalaya waanada ay saaxiibbadiis u soo jeediyeen, ayaa la sheegay in uu uga warramay sida jacaylku uu u yahay wax nafta aadanaha ku beeran oo aan sahal qofka aad jeclaato ugu illaawi karin.
Gabaygan waxa uu Cilmi mariyey markii Hodan loo mehiriyey Maxamed Shabeelle. Wuxuu uga calaalayaa dhibaatada uu ka maray gabadha jacaylkeeda iyo sida eexda leh ee nin kale looga siiyey. Waxa uu tilmaamayaa in uu ninka la siiyey Hodan, uu iska dhicin lahaa haddii aanu ka baqayn sharciga. Maansadu waa mid ay cadho ku dheehan tahay, isagoo ina tusaaleynaya in uu mid muunaddeeda ah aanu carrada ka waayin.
Inaadeer hagaagtaye haddaad hilinka sii qaaddo
Hantaq iyo Ilaah kuguma rido hagabihii Sheekhe
Mid hubsiimo badan baa tahoo halo la siiyaaye
Adigaan halyey kuu bidiyo horintii Daa’uude
Hillaac baa Berbera iiga baxay Hodan agteediiye
Hurdadana habeenkii ma ledo had iyo waagiiye
Sida hoorrimaad baa qalbigu ii hanqarayaaye
Waa lay horjoogaa sidii hordhacii geele
Inaan haybsigeed dhigay hadday Hodan i moodayso
Gabadh kaloon haasaawiyaa wayga haniyaade
Haddaan hadiyad caano ugu diro hoohlidaa gubiye
Maxaan kula hagaagaa yartii way han wayn tahaye
Cilmi Boodhari waxa cadaadis xoog lihi kaga yimid reerkiisii ka dib markii gabayadiisa iyo sheekadii caashaqiisa ay deegaankii oo dhan ku fideen. Waxa la sheegay in waagaas Hodan aanay aad ula dhacsanayn Cilmi, “oo ma doonayn inay guursato” sida uu qoray Cabdirashiid Maxamed Shabeelle, wiilkii Hodan. Sidaasoo ay tahayna, Cilmi fursad uma helin uu kula kulmo gabadha uu jeclaa, taas aawadeedna sheeko guur iyo haasaawe labadooda ma dhexmarin.
Haddaba, saaxiibbadiis Muuse iyo tabaase, waxa ay isku dayeen in ay u caqli celiyaan iyagoo ku waaninaaya in uu Hodan isaga haro, haddii kale uu ku waalanayo. Waxay u sheegeen in uu xitaa reerka Hodan ka dhalatay aanu ku lahayn waji uu ugu tago, reerkii iyo qaraabadiina ay u caraysan yihiin arrimaha laga sheegayo aawadood. Markii taladii saaxiibadiis ay isugu soo biyashubatay “Hodan isaga har” ayuu Boodhari gabaygan halkii ka tiriyey.
Marka horeba anigaa sahwiyey ina-adeerowe
Ooduba xigtay leedihiyo ubaxa geeduhuye
Abtiyaaladay baa ii ekayd inaan addeecaaye
Ammaantii Ugaar Cumar lahaa ereg maxaa geeyey?
Qaar hooyaday u eeddo too aada baa jiraye
Allahayow afkaygiyo sideen aadmiga u eeday!
Ama darayo oodwayne way omos badnaayeene
Abaaraa ku doogoobi lahaa ereyadaydiiye
Wixii kaa adkaadaaba waa aakhiroo kale e
Waa la igu eemaray cishqiga inaan ku ooyaaye
Mahdabtaba ma galo ruux hadduu aamin-goys yahaye
Axdigaad ka booddaa jannada oodda kaa rogaye (xidhiye)
Adigiyo ashahaadadaadu waysku alla seegteene
Ha u oofsan aakhiro waxaad urursataa yaalle!
Qalbigu Laba Jeclaan Waa!
Maalin ayaa iyadoo ay wada socdaan Cilmi Boodhari iyo saaxiibkiis, waxa ay soo mareen aqalkii habluhu ay ku casumi jireen; hablihii uu Cilmi diiday in uu mid kala baxo oo Hodan iska illaawo. Markan waxa ay u soo jeediyeen fikrad kale oo ay islahaayeen Cilmi wax kagala qabta jacaylka asiibay, iyagoo u soo jeediyey in uu gabadhii uu doono magaalada uu farta ugu fiiqo, ayna ku garab geli doonaan. Wuxuu Cilmi kula hadlay gabaygan, oo sidan filayo uu halkudhegga “Qalbigu laba jeclaan waa” ka soo arooray. Gabaygan oo hablihii laabta wada qaaday oo kaga ilmaysiiyey.
Luqun-madoobe awrkuba markuu laacdan baranaayo
Isagaa u laakimo badan laqanka xoolaha’e
Hadba qaalmo laacdan ah wuxuu luqunjibbaadhoba
Lix intaanu jirin haddii uu laacib ku ahaado
Anna laabta kama goynin caashaqii ladane
Luxudkaan la gelayaa sidaa igaga liildheere
Midnaay haysku kay lurin qalbigu laba jeclaan waaye!
QAARARKII HODON suugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxil Gabaygan wuxuu tiriyey mar la yidhi hablihii beesha uu kadhashay gabadh kasta ha tusto meesha u qurux badan bal si uu u ilaawo jacaylkanjiif iyo joogba u diiday markaa isaga oo la hadalaya hablihi quruxdooda soo bandhigayey wuxuu yidhi:
Oo qurux la daawado kol uun aadmi ku qancaayo Aniguba Qadraan soo arkiyo qaararkii Hodane
Hablayahow halkii qoomanayd baad i qabateene Qalbigaan bogsiinaayey baad qac iga siiseene
Qarqarrada jidhkiyo gacmuhu way qadhqadhayaane Qalbigu wax yeelaa illayn naaska qaawaniye
Inaan Eebbehay idin qatalin qariya laabtiina
CIDINA MAARAYNE Gabayagan waxaa layidhaahdaa waa gabayadii Ugu Danbeeyay cilmi inaatunu dhiman wuxuuna tiriyey Gabaygan mar loo sheegay in lasiiyey gabadhii uu Jeclaa ee hodon nin warsangeli ah oo la odhan jiray Mohamed Shabeele wuxuuna yidhi:
Waw muhanayaa maansadaad mari i leediine Hadaanse
madar ka sheegaayo oon walle ku maansoodo Martuba
way ka dhici layd hablaha muxibbo owgeede Murugada calooshayda
iyo muhanka laabtayda Miyi waxan la tegi waayey iyo
madaxdii Daa’uudka Meeraysigeedii waxaan ula madoobaaday
Muruq kuma kaxaysanine rag buu magansanaayaaye Haddii aanan mahiiggiyo ka biqin murabidkaa gaalka Amase aan mashraqo lay sudhayn maalin ma hayeene Alla magane sow dowladani meesha kama dhoofto Afartaa intaan miin ka dayey marin ma qaadsiiyey Mid kalena waa maansaday muhatay laabtaydu Mariil baa qardhaas loo tolaa
meelo la qabtaaye Mereg baa la gooyaa cishqaan cidina maareyne Inantaan naftayda u makalay way i moog tahaye Mid kalaaba loo meheriyey ooy meel u gogoshaaye Micna gaabanow dumar inaan malo la waydiinin Waa waxa martiyo loogu xidhay marada shaydaane Muxubiyo makaawo wakiil magac waxaan siiyey Maydhkii khasaaraysay iyo maaddi gabayeede Waa ii muraadday iyo waxaan uga muraaqoone Mitaalkeeda waan heli lahaa Maydh haddaan tago e Mudanihii Cismaan iyo bal aan Maakhir haybsado
DHAXANTA MEERAAYE Gabaygan waxaa layidhi isagoo dhulka xardhaya ayaa waxaa ku soo Baxay qolo ay asxaab ahaayeen markaa wuxuu is yidhi intaanay ku Waydiin u sheeg wuxuu yidhi: Nimanyahow dharaar iyo habeen waan dhadhabayaaye Dhulkuun baan xarriiqaa siday dhiillo ii timide Sida qaalin dhugatoobay oo geelii wada dhaafay Dhallinyaro ma raacee kalaan dhaxanta meeraaye Dhaqtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac wayn qaba e Iyana waygu dheeldheelayaan dhamacda Daa’uude Gardariyaasuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxil
suugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilsuugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxil
Gabaygan soo socda waxaa tiriyey abwaankii jacaylka Cilmi Boodhari wuxuuna kula hadlayaa Hodan tii uu jeclaa iyo naftiisaba. Hodan wuxuu leeyahay kaa joogi waayey oo kaa jiifu waayey waxaan kuula hadhayna ma jirto si walba kuula hadlay iina jixin jixi wayday. Markaa wuxuu leeyahay hadii ay caykaas tahay maxaan kuu dayn waayey een kuu daba socdaa? wuxuu yidhi: Intaan adiga kugu gooni ahaa geed hadaan la hadlo
Gardarniyaa maxaan Hodan Cabdaay kaaga go’i waayey? Mana goosan kari waayin oo geesi baan ahaye
Gardarniyaa maxaan Hodan Cabdaay kaaga go’i waayey? Haatanse waan guursan hadii guule ii wacaye
suugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxilHannaan Quruxsan suugaan – ku soo dhawaada shabakada saaxil
Gabaygani wuxuu ka mida ahaa gabayadii taxanaha ahaa ee uu Cilmi Boodhari kaga hadlayey jacaylkii uu Hodan u qabay. Gabaygan wuxuu Cilmi si gaar ah ugaga hadlay sida uu Hodan aduunyada hablaha jooga oo dhan uga doortay iyo quruxda Ilaahay uu siiyey. Wuxuu yidhi: Waxaan huguguf leeyaba dhakhsaan ku hor imaadaaye
Hal abuurka kuum aaan tirsheen heesta caashaqa e Bal hor joogsi daayoo anaan haynin aragaaga
Haabkooda may gelin cishqiga hawsha daba taale Inta uu hadhuudhlaha kudaray ama hed soo gooyey
Aniguna hensii kaama lumin u halgankiisiiye Waa waxan hadhuub ugu sitaa hoorka caashaqa e
Waa waxan hirdoogliyo caleen ugu horseedaaye Hablahoo dhan keligaa yartaay hibeda laysaarye
Adna inaanad haabkaa ahayn hubiyey dhawrjeere Naasahan sidii hooto waran hore u soo taagan
Ilka aan hogoodii ka lumin kalana hoosaynin Sankaagaa hanaankiyo qorshaa hadiyad loo siiyey
luquntii habkii geri lahaa halal wax dhaafsiisey Timo hoos garbaha uga degoo sinaha haab-haabtay
Categories: suugaanta . . Author: cabdi samed baashe
Comment by hoodo on November 22, 2011 12:49 AM
alaha u naxariisto , aakhirona waxa uu jeclaa alaha kusiiyo aduunka wuu ku dhibtoo dee.
Comment by abdifataah on February 5, 2012 2:01 PM
yaa donaya inuu cilmi boodhari wax ka ogaado gabayadiisi
Comment by abdifataah on February 5, 2012 2:02 PM
juxo iyo digisigii””” sheeko jacayla oo aad u xanuun badan